(၇) ရကျသားသမီး တဈပတျစာ ဗဒေငျ ဟောစာတမျး . ဆရာငွိမျးအေးလူ(ဗဒေငျသုတသေီ) – Askstyle
(၇) ရကျသားသမီး တဈပတျစာ ဗဒေငျ ဟောစာတမျး . ဆရာငွိမျးအေးလူ(ဗဒေငျသုတသေီ)
22.10.2020 မှ 28.10.2020 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
ယခုကာလအတွင်း သင်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဖြင့် အကျိုး ပေးမည်။ မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်း တိုးပွားခြင်းများရှိမည်။ လုပ်ငန်းကြီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်း များ ပေါ်ထွက်လာမည်။ အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများရခြင်း၊ အမှုအခင်းဖြစ်ရခြင်း၊ စိတ်ညစ်ရခြင်း များရှိမည်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မိမိစိတ်ကို အေးအေးဆေးဆေး ထားပါ။
စိတ်မြန်မှု၊ ဒေါသကြီးမှုများကြောင့် အမှားများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက ဌာနအတွင်း အဆင်ပြေမည်။ ဝင်ငွေလည်း အထူးကောင်းလိမ့်မည်။ထို့အပြင် အင်္ဂါသားသမီး တစ်ဦးဦးထံတွင် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံထားခြင်း၊ အပ်နှံထားခြင်းများ ရှိပါကလည်း ဆုံးရှုံးတတ်သည်ကို အထူးသတိပြုရသင့်ပါသည်။
မိမိအတွက် အရေးကြီးကိစ္စ များရှိပါက တနင်္ဂနွေသား မိဘ၊ အကြီးအကဲ၊ ဆရာသမား၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုင်ပင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ထံမှ အကြံဉာဏ်၊ အကူအညီ တောင်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်ပါက သားသမီးများအတွက်ကြောင့် မိမိ အိမ်ထောင်ဖက် နှင့် မကြာခဏ စကားများ ရန်ဖြစ်နေရလိမ့်မည်။ ပညာရေးလိုက်စားသူဖြစ်ပါက ပညာရေးတွင် အချစ်ရေးကိစ္စများ ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်ကို အထူးသတိပြုသင့် ပါသည်။အချစ်ရေး သီးသန့်ကတော့ စန်းပွင့်နေမည်။ ချစ်သူခင်သူများလာမည်။
ဒီတစ်ပတ်အတွင်း စီးပွားရေးတွင် ပြည်ပနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းများ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာ မှုရှိပြီး အဆင်ပြေမှု နည်းပါးနေတတ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူမျိုးကွဲများနှင့် စပ်တူတွဲဖက် လုပ်ကိုင်ခြင်း များ အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အကျိုးပေး ထက်သန် လိမ့်မည်။ သတိ ထားစေချင်တာက အပျော်အပါးနှင့် လောင်းကစား ကိစ္စများကြောင့် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များတွင် ဆိုးကျိုးများ အလွန်သက်ရောက်တတ်သည်ကို အထူးသတိထားပါ။
ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက စကားပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် ချင့်ချိန် စဉ်းစား ပြောဆိုဆက်ဆံသင့်သည်။ မထင်မှတ်ပဲ ပြောဆို လိုက်သောမိမိ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ပြဿနာများ ဖြေ ရှင်းရသည်အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင် များ မိသားစုနှင့် အတူတကွ အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် နေထိုင်လိုသောစိတ်များ ပြင်းပြနေတတ်ပါ သည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် အချစ်ကြီးပြီး အမျက်ကြီး သော သူမျိုးနှင့် တွေ့ရတတ်ပါသည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကံအထူးကောင်းမည်။ ပညာအမွေပေး မည့်သူများ နှင့်လည်း တွေ့ရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အစာအိမ်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါဝေဒနာများ ဖြစ်ပေါ် ခံစားရတတ် သည်။ ပူပူနွေးနွေး အစားအစာများကိုသာ စားသုံးပါ။
ဤကာလများအတွင်း အရေးကြီးလုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် စနေသားသမီး၊ အကြီးအကဲ၊ မိတ်ဆွေ၊ ဆရာသမားများနှင့် တိုင်ပင်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ထံမှ အကြံဉာဏ်၊ အကူအညီတောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လက်ရှိလုပ်ငန်းနှင့် အဆင်မပြေဘဲ အခက်အခဲအနှောက်အယှက် များရှိနေမည်။ မိမိအိမ်ထောင်ရေးသည် စီးပွားရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသဖြင့် စီးပွားရေးအဆင်ပြေလျှင် အိမ်တွင်းရေး အေးချမ်းသာယာမှုရှိမည်။ စီးပွားရေးကျဆင်းလျှင် အိမ်တွင်းရေး အဆင်မပြေမှုများရှိနေမည်။
ငယ်ရွယ်သူများ၏ အချစ်ရေးမှာ မရေရာ၊ မသေချာသော အဖြစ်မျိုးနှင့် ကြုံတွေ့ရတတ်ခြင်း၊ မိဘဆွေမျိုးသားချင်း များနှင့် ခေတ္တခွဲခွာ နေရတတ်ခြင်းများ ရှိမည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အနာများပေါက်ခြင်း၊ အဖု၊ အကျိတ်များ ထွက်ခြင်းများ ရှိမည်။ လက်နဲ့ညှစ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။ပိုဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။
ယတြာ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာကို နေ့စဉ် ၃၇ခေါက်ရွတ်ပွားပူဇော်ပါ။
ယခုကာလအတွင်း အပြိုင်အဆိုင်၊ အတိုက်အခံနှင့် အနှောင့်အယှက်များ အလွန်ပေါများခြင်းနှင့် မနာလိုဖြစ် နေ သူများ အလွန်ပေါများနေမည်။ မိမိအား ပြိုင်ဆိုင်နေသူ များသည် သူ့အလိုလို ပြေပျောက်သွားမည်ဖြစ်၍ စိုးရိမ် စရာ ကြီးကြီးမားမား မရှိပါ။ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက ပြောသင့်သည့်စကားများကို မပြောမိခြင်း၊ လုပ်သင့်သည် အလုပ် များကို မလုပ်မိခြင်းတို့ကြောင့် မိမိတို့ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေးကောင်းများ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရတတ်သည် ကို အထူး သတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။
ယခုကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက အကောင် အထည်ဖေါ်၍ အထူးကြိုးစားလုပ်ကိုင်သင့်ပါသည်။ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများဖြင့်လည်း အထူး အကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ လူအများ၏ လေး စား ချစ်ခင်၊ ယုံကြည်ခံရခြင်းများ ရှိနေမည်။ ငယ်ရွယ်သူများ၏ အချစ်ရေးမှာ မိမိချစ်သူအပေါ် စိတ်မချ ဖြစ်နေခြင်း၊ သဝန်တိုနေခြင်းများရှိမည်။
ပညာရေး လေ့လာလိုက်စားသူများ ဖြစ်ပါကပညာရေးတွင် ကြိုးစားသလောက်အရာ မထင် ဖြစ်နေရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် မျက်စိနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားတတ် ပါ ၍ အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ ဤကာလများအတွင်း မည်သည့်ရောဂါ ဝေဒနာများ ရသည်ဖြစ်စေ၊ ဆေးထိုး၊ ဆေးသောက် မပျင်းပါနှင့်။
ယတြာ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ် ဘုရားကပ်လှူပေးပါ။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်မြတ်ရတနာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက မိမိမျှော်လင့်ထားသလောက် အကျိုးအမြတ် များများ စားစား ရရှိနိုင် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မိမိ၏ အရေးကြီးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများနှင့် ပြောဆိုတိုင်ပင်ခြင်း ပြုပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်ပါက မိသားစုအလှူအတန်းကိစ္စများ ပြုလုပ်ရနိုင်မည်။ ပညာရေးမှာ အကောင်းနှင့်အဆိုး ဒွန်တွဲနေချိန်ဖြစ်၍ ယခင်အချိန်များထက်ပို၍ အာရုံစိုက်ပေးပါ။ ငယ်ရွယ်သူ များ၏ အချစ် ရေးမှာ ကောင်းတစ်ခါ၊ ဆိုးတစ်လှည့် ပျော်ရွှင်စရာများရှိသလို စိတ်ညစ်စရာများလည်း ရှိမည်။ ကျန်းမာ ရေးတွင် ရောဂါဟောင်းများ၊အနာဟောင်းများပြန်ဖြစ်တတ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတတ်ပါ သည်။
ယခုကာလအတွင်း သင်၏ကံကြမ္မာတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအတိုက်အခံများသည် ယခင်ကာလများထက် ပို၍ လျော့နည်းသွားတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေနေသူများ ဖြစ်ပါက မိမိကိုယ်တိုင် ဝါသနာပါသော မိမိဆန္ဒ ရှိသောအလုပ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အစုစပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အကျိုးဖြစ် ထွန်းနိုင်မည်။ ငွေကြေးစုဆောင်းနိုင်ခြင်း မရှိပဲ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ငွေကုန်ပေါက်များ ပေါ်ပေါက် လာ တတ်သည်။
သို့သော်လည်း ယခုကာလအတွင်း ထီပေါက်ခြင်း ၊ငွေကြေး အလုံးအရင်းနှင့်ဝင်ခြင်း၊ဆုကြေးများ ရခြင်း စသည်ဖြင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ငွေဝင်တတ်မည်ဖြစ်၍ ထီထိုးခြင်း၊ ကံစမ်းခြင်းများကို ပြုပေးသင့်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင် ဖြစ်ပါက အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေမည်။မိသားစုအတွင်းစိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းစကား ကြားရ တတ်ပါသည်။ ပညာရေး လိုက်စားသူဖြစ်ပါက ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်း၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ သင်တန်းများ တတ်ရောက် ရခြင်းများလည်း ရှိမည်။
ငယ်ရွယ်သူများ အသွားအလာ၊ အနေအထိုင် အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အလည်လွန်ရာမှလည်း အိမ်ထောင်ကျတတ်ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ရောဂါအခံမရှိသူများ အညံ့မရှိပေမယ့် ရောဂါအခံရှိသူများဆီး၊ ကျောက်ကပ် ဒုက္ခ ပေးတတ်ခြင်းများရှိနေမည်။
ယတြာ သကြားလုံးလေးများဝယ်ပြီး နီးစပ်တဲ့ကလေးတွေကိုဝေကျွေးလိုက်ပါ။
ယခုကာလအတွင်း များသောအားဖြင့် သင်၏ကံဇာတာမှာ အထူးကောင်းမွန်နေပါ၍ အလိုဆန္ဒရှိသည်များကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သင့်ပါသည်။ သတိထားဖို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးကြီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်လျှင် ၊ ခရီးသွားလျှင် အနက်ရောင်၊ အနီရဲရဲ၊ အညိုရင့်ရင့်၊ ခရမ်းပုတ်ပုတ်အရောင် အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို အထူးရှောင်ကြဉ်ပါ။ အလှူအတန်း ကုသိုလ်များ ထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ်ဖြစ်မည်။ မိမိဆွေမျိုး၊ လူကြီးမိဘ၊ ဆရာ သမား များကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်လေးလှူဒါန်းကန်တော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပြည်တွင်း (သို့မဟုတ်) ပြည်ပခရီး များသွားရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ဖြစ်ပါက အိမ်တွင်း စီးပွားရေး ဝင်ငွေကောင်းနေပါသော်လည်း မိမိအိမ် ထောင်ဖက်နှင့် အဆင်မပြေမှုများ များစွာရှိနေမည်။ အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့် ခွဲခွာနေရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများ၏ အချစ်ရေးကိစ္စမှာ စဉ်းစားနိုင်မှ တော်ရုံ ကျနေမည်။
ကျန်းမာရေး တွင် မတည့်စာများ ရောစာမိခြင်း၊ မိမိနှင့်ဓါတ်မတည့်သည့် အစားအစာများကို စားမိခြင်းများကြောင့် ကျန်းမာရေး ကို အထူးထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ အသွားအလာ ဆင်ခြင်ထိန်းသိမ်းနိုင် ကာမှ အထူးကောင်းပါလိမ့်မည်။ ပညာရေးတွင် ကြိုးစားထားသမျှအရာထင်ပေါက်မြောက်မည်။
ယတြာ ဩဇာသီးလေးများဝယ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဘုရားစေတီတွေမှာလှူဒါန်းပေးပါ။
22.10.2020 မှ 28.10.2020 အထိ တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
ယခုကာလအတှငျး သငျသညျ စီးပှားရေး လုပျငနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးမြားဖွငျ့ အကြိုး ပေးမညျ။ မိတျကောငျး၊ ဆှကေောငျး တိုးပှားခွငျးမြားရှိမညျ။ လုပျငနျးကွီးမြား လုပျကိုငျနိုငျရနျ အခှငျ့အလမျးကောငျး မြား ပျေါထှကျလာမညျ။ အိမျနီးနားခငျြးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ စကားမြားရခွငျး၊ အမှုအခငျးဖွဈရခွငျး၊ စိတျညဈရခွငျး မြားရှိမညျ။ အတတျနိုငျဆုံး မိမိစိတျကို အေးအေးဆေးဆေး ထားပါ။
စိတျမွနျမှု၊ ဒေါသကွီးမှုမြားကွောငျ့ အမှားမြား ကွုံတှရေ့တတျပွီး ကနျြးမာရေးကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျပါသညျ။ ဝနျထမျးမြား ဖွဈပါက ဌာနအတှငျး အဆငျပွမေညျ။ ဝငျငှလေညျး အထူးကောငျးလိမျ့မညျ။ထို့အပွငျ အင်ျဂါသားသမီး တဈဦးဦးထံတှငျ ငှကွေေးရငျးနှီးမွှပျနှံထားခွငျး၊ အပျနှံထားခွငျးမြား ရှိပါကလညျး ဆုံးရှုံးတတျသညျကို အထူးသတိပွုရသငျ့ပါသညျ။
မိမိအတှကျ အရေးကွီးကိစ်စ မြားရှိပါက တနင်ျဂနှသေား မိဘ၊ အကွီးအကဲ၊ ဆရာသမား၊ ပုဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့ တိုငျပငျခွငျး၊ ၎င်းငျးတို့ထံမှ အကွံဉာဏျ၊ အကူအညီ တောငျခံခွငျးမြား ပွုလုပျသငျ့ပါသညျ။ အိမျထောငျရှငျဖွဈပါက သားသမီးမြားအတှကျကွောငျ့ မိမိ အိမျထောငျဖကျ နှငျ့ မကွာခဏ စကားမြား ရနျဖွဈနရေလိမျ့မညျ။ ပညာရေးလိုကျစားသူဖွဈပါက ပညာရေးတှငျ အခဈြရေးကိစ်စမြား ဝငျရောကျနှောကျယှကျမှုမြား ကွုံတှရေ့တတျသညျကို အထူးသတိပွုသငျ့ ပါသညျ။အခဈြရေး သီးသနျ့ကတော့ စနျးပှငျ့နမေညျ။ ခဈြသူခငျသူမြားလာမညျ။
ဒီတဈပတျအတှငျး စီးပှားရေးတှငျ ပွညျပနှငျ့ ဆကျသှယျလုပျကိုငျရသော လုပျငနျးမြား နှောငျ့နှေး ကွနျ့ကွာ မှုရှိပွီး အဆငျပွမှေု နညျးပါးနတေတျသညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားတှငျ လူမြိုးကှဲမြားနှငျ့ စပျတူတှဲဖကျ လုပျကိုငျခွငျး မြား အထူးရှောငျကွဉျသငျ့ပါသညျ။ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေး လုပျငနျးမြားဖွငျ့သာ အကြိုးပေး ထကျသနျ လိမျ့မညျ။ သတိ ထားစခေငျြတာက အပြျောအပါးနှငျ့ လောငျးကစား ကိစ်စမြားကွောငျ့ သငျ၏စီးပှားရေးလုပျငနျး မြားတှငျ ဆိုးကြိုးမြား အလှနျသကျရောကျတတျသညျကို အထူးသတိထားပါ။
ဝနျထမျးဖွဈပါက စကားပွောဆိုဆကျဆံရာတှငျ ခငျြ့ခြိနျ စဉျးစား ပွောဆိုဆကျဆံသငျ့သညျ။ မထငျမှတျပဲ ပွောဆို လိုကျသောမိမိ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ ပွဿနာမြား ဖွေ ရှငျးရသညျအထိ ဖွဈသှားတတျပါသညျ။ အိမျထောငျရှငျ မြား မိသားစုနှငျ့ အတူတကှ အေးအေးခမျြးခမျြး ပြျောပြျော ရှငျရှငျ နထေိုငျလိုသောစိတျမြား ပွငျးပွနတေတျပါ သညျ။ ငယျရှယျသူမြား အခဈြရေးတှငျ အခဈြကွီးပွီး အမကျြကွီး သော သူမြိုးနှငျ့ တှရေ့တတျပါသညျ။ ပညာရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကံအထူးကောငျးမညျ။ ပညာအမှပေေး မညျ့သူမြား နှငျ့လညျး တှရေ့တတျသညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ အစာအိမျနှငျ့ ပတျသကျသော ရောဂါဝဒေနာမြား ဖွဈပျေါ ခံစားရတတျ သညျ။ ပူပူနှေးနှေး အစားအစာမြားကိုသာ စားသုံးပါ။
ဤကာလမြားအတှငျး အရေးကွီးလုပျငနျးကိစ်စမြားအတှကျ စနသေားသမီး၊ အကွီးအကဲ၊ မိတျဆှေ၊ ဆရာသမားမြားနှငျ့ တိုငျပငျခွငျး၊ ၎င်းငျးတို့ထံမှ အကွံဉာဏျ၊ အကူအညီတောငျးခံခွငျးမြား ပွုလုပျဆောငျရှကျသငျ့ပါသညျ။ ဝနျထမျးဖွဈပါက လကျရှိလုပျငနျးနှငျ့ အဆငျမပွဘေဲ အခကျအခဲအနှောကျအယှကျ မြားရှိနမေညျ။ မိမိအိမျထောငျရေးသညျ စီးပှားရေးနှငျ့ တိုကျရိုကျပတျသကျနသေဖွငျ့ စီးပှားရေးအဆငျပွလြှေငျ အိမျတှငျးရေး အေးခမျြးသာယာမှုရှိမညျ။ စီးပှားရေးကဆြငျးလြှငျ အိမျတှငျးရေး အဆငျမပွမှေုမြားရှိနမေညျ။
ငယျရှယျသူမြား၏ အခဈြရေးမှာ မရရော၊ မသခြောသော အဖွဈမြိုးနှငျ့ ကွုံတှရေ့တတျခွငျး၊ မိဘဆှမြေိုးသားခငျြး မြားနှငျ့ ခတ်ေတခှဲခှာ နရေတတျခွငျးမြား ရှိမညျ။ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ အနာမြားပေါကျခွငျး၊ အဖု၊ အကြိတျမြား ထှကျခွငျးမြား ရှိမညျ။ လကျနဲ့ညှဈတာမြိုးတှမေလုပျပါနဲ့။ပိုဆိုးသှားတတျပါတယျ။
ယတွာ သမ်ဗုဒ်ဓဂေါထာကို နစေ့ဉျ ၃၇ခေါကျရှတျပှားပူဇျောပါ။
ယခုကာလအတှငျး အပွိုငျအဆိုငျ၊ အတိုကျအခံနှငျ့ အနှောငျ့အယှကျမြား အလှနျပေါမြားခွငျးနှငျ့ မနာလိုဖွဈ နေ သူမြား အလှနျပေါမြားနမေညျ။ မိမိအား ပွိုငျဆိုငျနသေူ မြားသညျ သူ့အလိုလို ပွပြေောကျသှားမညျဖွဈ၍ စိုးရိမျ စရာ ကွီးကွီးမားမား မရှိပါ။ ဝနျထမျးမြား ဖွဈပါက ပွောသငျ့သညျ့စကားမြားကို မပွောမိခွငျး၊ လုပျသငျ့သညျ အလုပျ မြားကို မလုပျမိခွငျးတို့ကွောငျ့ မိမိတို့ ရရှိနိုငျသော အခှငျ့အရေးကောငျးမြား လကျလှတျဆုံးရှုံးရတတျသညျ ကို အထူး သတိပွုဆငျခွငျသငျ့ပါသညျ။
ယခုကာလအတှငျး စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို တိုးခြဲ့လုပျကိုငျမညျဆိုပါက အကောငျ အထညျဖျေါ၍ အထူးကွိုးစားလုပျကိုငျသငျ့ပါသညျ။ ဖကျစပျလုပျငနျးမြား ရှယျယာလုပျငနျးမြားဖွငျ့လညျး အထူး အကြိုးပေး အောငျမွငျမညျ။ အခှငျ့အလမျးကောငျးမြားစှာလညျး ရရှိပိုငျဆိုငျနိုငျပါသညျ။ လူအမြား၏ လေး စား ခဈြခငျ၊ ယုံကွညျခံရခွငျးမြား ရှိနမေညျ။ ငယျရှယျသူမြား၏ အခဈြရေးမှာ မိမိခဈြသူအပျေါ စိတျမခြ ဖွဈနခွေငျး၊ သဝနျတိုနခွေငျးမြားရှိမညျ။
ပညာရေး လလေ့ာလိုကျစားသူမြား ဖွဈပါကပညာရေးတှငျ ကွိုးစားသလောကျအရာ မထငျ ဖွဈနရေတတျသညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ မကျြစိနှငျ့ အာရုံကွောဆိုငျရာ ရောဂါဝဒေနာမြား ဖွဈပျေါခံစားတတျ ပါ ၍ အထူးဂရုစိုကျသငျ့ပါသညျ။ ဤကာလမြားအတှငျး မညျသညျ့ရောဂါ ဝဒေနာမြား ရသညျဖွဈစေ၊ ဆေးထိုး၊ ဆေးသောကျ မပငျြးပါနှငျ့။
ယတွာ ပေါငျမုနျ့ထောပတျသုပျ ဘုရားကပျလှူပေးပါ။
သငျ၏စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရှေ၊ ငှေ၊ ကြောကျမွတျရတနာ အရောငျးအဝယျလုပျငနျး လုပျကိုငျသူဖွဈပါက မိမိမြှျောလငျ့ထားသလောကျ အကြိုးအမွတျ မြားမြား စားစား ရရှိနိုငျ လိမျ့မညျမဟုတျပါ။ မိမိ၏ အရေးကွီးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ တနင်ျလာ၊ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားနှငျ့ ပွောဆိုတိုငျပငျခွငျး ပွုပါ။ အိမျထောငျရှငျဖွဈပါက မိသားစုအလှူအတနျးကိစ်စမြား ပွုလုပျရနိုငျမညျ။ ပညာရေးမှာ အကောငျးနှငျ့အဆိုး ဒှနျတှဲနခြေိနျဖွဈ၍ ယခငျအခြိနျမြားထကျပို၍ အာရုံစိုကျပေးပါ။ ငယျရှယျသူ မြား၏ အခဈြ ရေးမှာ ကောငျးတဈခါ၊ ဆိုးတဈလှညျ့ ပြျောရှငျစရာမြားရှိသလို စိတျညဈစရာမြားလညျး ရှိမညျ။ ကနျြးမာ ရေးတှငျ ရောဂါဟောငျးမြား၊အနာဟောငျးမြားပွနျဖွဈတတျပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားရတတျပါ သညျ။
ယခုကာလအတှငျး သငျ၏ကံကွမ်မာတှငျ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးအတိုကျအခံမြားသညျ ယခငျကာလမြားထကျ ပို၍ လြော့နညျးသှားတတျပါသညျ။ အလုပျအကိုငျ ရှာဖှနေသေူမြား ဖွဈပါက မိမိကိုယျတိုငျ ဝါသနာပါသော မိမိဆန်ဒ ရှိသောအလုပျကို ခကျခကျခဲခဲဖွငျ့ ရရှိနိုငျပါသညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အစုစပျလုပျကိုငျခွငျးဖွငျ့ အကြိုးဖွဈ ထှနျးနိုငျမညျ။ ငှကွေေးစုဆောငျးနိုငျခွငျး မရှိပဲ၊ အကွောငျးအမြိုးမြိုးဖွငျ့ ငှကေုနျပေါကျမြား ပျေါပေါကျ လာ တတျသညျ။
သို့သျောလညျး ယခုကာလအတှငျး ထီပေါကျခွငျး ၊ငှကွေေး အလုံးအရငျးနှငျ့ဝငျခွငျး၊ဆုကွေးမြား ရခွငျး စသညျဖွငျ့ တဈနညျးနညျးဖွငျ့ ငှဝေငျတတျမညျဖွဈ၍ ထီထိုးခွငျး၊ ကံစမျးခွငျးမြားကို ပွုပေးသငျ့သညျ။ အိမျထောငျရှငျ ဖွဈပါက အိမျထောငျရေး အဆငျပွမေညျ။မိသားစုအတှငျးစိတျခမျြးသာစရာသတငျးစကား ကွားရ တတျပါသညျ။ ပညာရေး လိုကျစားသူဖွဈပါက ဘာသာရပျဆိုငျရာ သငျတနျး၊ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာ သငျတနျးမြား တတျရောကျ ရခွငျးမြားလညျး ရှိမညျ။
ငယျရှယျသူမြား အသှားအလာ၊ အနအေထိုငျ အထူးဂရုစိုကျသငျ့ပါသညျ။ သို့မဟုတျပါက အလညျလှနျရာမှလညျး အိမျထောငျကတြတျရပါသညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ ရောဂါအခံမရှိသူမြား အညံ့မရှိပမေယျ့ ရောဂါအခံရှိသူမြားဆီး၊ ကြောကျကပျ ဒုက်ခ ပေးတတျခွငျးမြားရှိနမေညျ။
ယတွာ သကွားလုံးလေးမြားဝယျပွီး နီးစပျတဲ့ကလေးတှကေိုဝကြှေေးလိုကျပါ။
ယခုကာလအတှငျး မြားသောအားဖွငျ့ သငျ၏ကံဇာတာမှာ အထူးကောငျးမှနျနပေါ၍ အလိုဆန်ဒရှိသညျမြားကို ကွိုးစားလုပျကိုငျသငျ့ပါသညျ။ သတိထားဖို့ကစီးပှားရေးလုပျငနျးမြားတှငျ အရေးကွီးကိစ်စမြား ဆောငျရှကျလြှငျ ၊ ခရီးသှားလြှငျ အနကျရောငျ၊ အနီရဲရဲ၊ အညိုရငျ့ရငျ့၊ ခရမျးပုတျပုတျအရောငျ အဝတျအစားမြား ဝတျဆငျခွငျးကို အထူးရှောငျကွဉျပါ။ အလှူအတနျး ကုသိုလျမြား ထူးထူးခွားခွား ပွုလုပျဖွဈမညျ။ မိမိဆှမြေိုး၊ လူကွီးမိဘ၊ ဆရာ သမား မြားကိုလညျး တတျနိုငျသလောကျလေးလှူဒါနျးကနျတော့နိုငျပါလိမျ့မယျ။
ပွညျတှငျး (သို့မဟုတျ) ပွညျပခရီး မြားသှားရနျ အခှငျ့အလမျးကောငျးမြား ပျေါပေါကျလာနိုငျပါသညျ။ အိမျထောငျရှငျမြား ဖွဈပါက အိမျတှငျး စီးပှားရေး ဝငျငှကေောငျးနပေါသျောလညျး မိမိအိမျ ထောငျဖကျနှငျ့ အဆငျမပွမှေုမြား မြားစှာရှိနမေညျ။ အကွောငျးတဈခုခု ကွောငျ့ ခှဲခှာနရေတတျသညျ။ ငယျရှယျသူမြား၏ အခဈြရေးကိစ်စမှာ စဉျးစားနိုငျမှ တျောရုံ ကနြမေညျ။
ကနျြးမာရေး တှငျ မတညျ့စာမြား ရောစာမိခွငျး၊ မိမိနှငျ့ဓါတျမတညျ့သညျ့ အစားအစာမြားကို စားမိခွငျးမြားကွောငျ့ ကနျြးမာရေး ကို အထူးထိခိုကျစတေတျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ အစားအသောကျ၊ အနအေထိုငျ၊ အသှားအလာ ဆငျခွငျထိနျးသိမျးနိုငျ ကာမှ အထူးကောငျးပါလိမျ့မညျ။ ပညာရေးတှငျ ကွိုးစားထားသမြှအရာထငျပေါကျမွောကျမညျ။
ယတွာ ဩဇာသီးလေးမြားဝယျပွီး ဘုနျးကွီးကြောငျးနှငျ့ဘုရားစတေီတှမှောလှူဒါနျးပေးပါ။